Arday soo saartay hab cusub oo loo beeri karo cawska caro la'aan - Wargeyska Faafiye
Home 2014 October 22 .Warka Arday soo saartay hab cusub oo loo beeri karo cawska caro la'aan
Arday soo saartay hab cusub oo loo beeri karo cawska caro la'aan
October 22, 2014 · by	Liban Farah ·
Ardaydani oo wax ka barata Jamacadda Jazeera magalada Muqdisho gaar ahaan Kuliyadda Beeraha iyo Xanaanada Xoolaha ayaa maanta magalada Muqdisho ku soo ban dhigay hab abuur cusub oo aan horey looga aqoon dalka iyagoo soo saaray calafka xoolaha oo labeerayo ciid la’aan ,ama caro la’aan.
Cowskan ku baxaya ciid la’aanta oo ay maanta soo bandhigeen ardayda wax ka barta Jamaacdda Jazeera ayaa ah calafka laga beeray abuurka Masagadda ee ka baxda dhulkeen isla markaana ay mudo todobaadyo ah kadib noqonaya cows lasiin karo xoolaha ,Waxeyna sheegeen ardayda in calafkaan la beerayo ciid la’aanta ay uu kaalin weyn ka qaadan karaan bad badinta xoolaha Dadka Soomaaliyeed ee markasta oo ay abaaro ka dhacaan dalka ay ku la’daan xoolo badan.
Mid ka mid ah ardaydaasi soo diyaarisay hanaankan cusub oo loo diyaariyo beerista abuurka cawska ayaa sheegay in isku day badan ka dib ay ku guuleysteen in ay soo saaraan caws baxaya ciid la’aan.
Hormuudka Kuliyada Beeraha iyo Xannaanada Xooolaha ee Jamaacadda Jaziira Maxamed Dayib Sheekh Abuukar oo aan waraysi gaar ah siiyey Dawlada ayaa sheegay in faa’idada ugu weyn oo arrinta ay leedahaya ay tahay in muddo kooban gudaheeda lagu soo saari karo caws ay Xoolaha cuni karaan taasina ay tahay hab cusub oo loo beeri karo calafka Xoolaha.
Waa markii ugu horaysay ardayda wax ka abarta Jamaacdaha wadanka ay soo sareen habkani ciusub ee lagu beerayo calafka Xoolaha waxayna tani muujinaysaa sida ardayda Soomaaliyeed ay kaga go’antahay in hormariyaan aqoontooda isla markaana soo saaraan wax faa’ido u leh dadka Soomaaliyeed.
Britain oo sheegtay in la gaaray wakhtigii ay somaliya wax ka qaban leheed.
Ma Maqashay GUMEEYSTAHA Somalida Ku Nool Minneapolis BASIM Sabri ?